दाहाल–नेपाल समूहद्वारा आधिकारिकता दाबी, अब के हुन्छ ?
पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल
काठमाडौँ । राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन्: महान्यायाधिवक्ता
काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको स्पष्ट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमाथिको आजको बहसमा उहाँले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरे ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद कायमै छ, कसरी दल दर्ता हुन्छ त ? भन्ने आम चासो जनमानसमा कायमै छ ।
नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबार बस्ने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । सो समूहका केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पार्टीका तर्फबाट देशव्यापी रुपमा गरिएको जनसभा तथा प्रदर्शन, भावी कार्यक्रम र कार्ययोजनाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो ।
भोली प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेको छ । उक्त समूहले सोमबार बिहान ११ बजे बबरमहलस्थित कार्की ब्यांक्वेटमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको हो। बैठकमा संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनको समीक्षा र भावी कार्यक्रमका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बागमती प्रदेश कमिटीले प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचन घोषणा गरिएको नयाँ परिस्थितिमा यही माघ २३ गते काठमाडौँ गर्ने जनसभाको तयारी गरेको छ । काठमाडौँको ट्राफिक जाम नहोस् भनेर सभाको आयोजनास्थल नारायणहिटी दरबार
प्रचण्डले भनेः मैले अब गुमाउन केही पनि बाँकी छैन, अबको बाँकी जीवन नेपाली जनतालाई हो
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो अबको बाँकी जीवन नेपाली जनतालाई भएको बताएका छन् । शुक्रबार विराटनगरमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘निर्वाचन आयोगले ओलीलाई धक्का दिएको छ, सडकछाप पार्टीको १५०० केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिएको छैन’
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगको निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धक्का दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक भन्दै विराटनगरमा उक्त प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
नेकपा ओली पक्षले निर्वाचन आयोगसँग गर्यो यस्तो आग्रह
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षले निर्वाचन आयोगलाई दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न भन्दै आयोगले आज नेकपा ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
पत्रकारलाई महेश बस्नेतले दिएको धम्कीविरुद्ध प्रेस युनियनको आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकारहरुलाई धम्की दिएको भन्दै नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति जनाएको छ । बस्नेतले बिभिन्न संचारमाध्यमका सम्पादकलाई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको युनियनले जनाएको छ ।